Ny fiaramanidina Montenegro Airlines misy sambo 90 no manao fiononana maika any Russia
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny fiaramanidina Montenegro Airlines misy sambo 90 no manao fiononana maika any Russia
Moscow-mifatotra Seranam-piaramanidina Montenegro Ny sidina YM610, nitondra mpandeha 85 sy mpikambana ekipa dimy, dia voatery niova lalana ary nanao fiantsonana vonjy maika taorian'ny nahatsapany marary tampoka ny mpanamory azy raha nidina ny fiaramanidina.
Niainga avy tao Tivat ny fiaramanidina niaraka tamin'ny olona 90 ny alarobia maraina ary nankany Mosko Seranam-piaramanidina Domodedovo. Saingy rehefa nidina ny fiaramanidina Fokker 100 midadasika dia nanambara fa misy vonjy taitra ary navily lalana tany Kaluga, tanàna atsimon'i Moskoa, 135km eo ho eo miala ny toerana nalehany.
Ny fiviliana dia noho ny fahasalamana tampoka teo amin'ireo ekipa. Ny sasantsasany tamin'ny sidina fiaramanidina “torana ny mpanamory voalohany”, hoy ny fampitam-baovao Rosiana, nitanisa ireo sampan-draharaha maika
Raha ny loharanom-baovao dia ny zava-nitranga dia nanomboka nidina ilay fiaramanidina rehefa nanakaiky an'i Moskoa izy.
Nahomby ny fidinana an-tanety, nohamafisin'ny seranam-piara-manidina, miaraka amin'ny mpandeha sy ny ekipazy rehetra mankany amin'ny terminal. Fiara mpamonjy voina maromaro no nentina haingana teny an-toerana. Nahatsiaro tena ilay mpanamory fiaramanidina taorian'ny fipetrahana.
Ny tatitra teo aloha dia nanolo-kevitra fa voan'ny aretim-po ilay mpanamory fiaramanidina saingy tsy nanamafy izany ny tompon'andraikitra amin'ny fitsaboana. Ilay lehilahy dia "tsy mitaky hopitaly ary halefa any amin'ny seranam-piaramanidina", hoy ny mpitondra tenin'ny hopitaly.
Fanodinana savony manerantany: mpiara-miasa amin'ny Carnival Cruise Line miaraka amin'ny Clean the World
Miarahaba ny Repoblikan'i Kiribati ny sekreteram-panjakana amerikana